ACCA | YEC
ACCA မှ F3 Financial Accounting ဘာသာရပ် ကို ACCA 14 ဘာသာစလုံးအောင်မြင်ပြီးသည်.ပြီးသည်.အပြင် MBA ဘွဲ.ရ အတွေ့အကြုံရှိ ဆရာ Affiliate Member ကိုယ်တိုင် သင်ကြားမည်။
အားလုံးသိကြတဲ.အတိုင်း ကျွန်တော်တို. မန္တလေးမှာ ACCA Affiliate Member ကိုယ်တိုင်သင်ကြားတာမရှိသလောက်ရှားပါသည်။ သတင်းကောင်းအနေဖြင်. Y.E.C Learning Center တွင် Nov 2016 မှာ ACCA Diploma in International Financial Reporting (IFRS) ကို အောင်မြင်စွာဖွင်.လှစ်နိုင်ခဲ.ပြီး သင်တန်းသားများတောင်းဆိုချက်အရ မကြာခင်မှာ ACCA Part I မှ F3 Financial Accounting ဘာသာရပ်ကို ဖွင်.လှစ်သွားမည်ဖြစ်ပါသည်။
သင်တန်းစတင်မည်.ရက် – Feb 15
သင်တန်းချိန် – Every Wed & Thurs (7:00 AM to 8:30 AM)
သင်တန်းကာလ –4Months
သင်တန်းကြေး – 200,000 ကျပ်
ACCA မှာ (၃) ပိုင်းပါ ရှိပါသည်။
Part III- Professional Level တွင် (5 Papers) ရှိပါသည်။
Total 14 Paper ဖြေဆိုပြီးပါက ACCA Affiliate Member ဖြစ်ပါမည်။
မကြာခင်မှာ Y.E.C Learning Center အနေဖြင်. ACCA Part I – Knowledge Modules ကို စတင်သွားပါမည်။ ACCA Part I မှ Paper3ခုမှာ
Paper I ပြီးပါက Diploma in Business & Accounting ကို ရရှိပါမည်။
-Finance & Accounting ဖြင်. အသစ်မွေးဝမ်းကြောင်းပြုမည်.သူများ
-ဘာသာရပ်တစ်ခုချင်းစီကို လေ.လာလိုသူများ (တစ်ဘာသာချင်းပြီးပါက ACCA မှ ပေးအပ်မည်. certificate ရရှိပါမည်။)
-LCCI Level3ပြီးဆုံးပြီးသူများ
ဆရာ ဦးကျော်ထင်ဝင်းသည် ACCA ဘာသာရပ်များကို သင်ကြားပေးလျက်ရှိပြီး Company ကြီးများတွင် Audit လုပ်ပေးလျက်ရှိသည်။ ဆရာ.အနေဖြင်. Economics နဲ. ပထမဘွဲ.ရရှိခဲ. ပြီး ACCA (UK) အဖွဲ.ဝင်ဖြစ်သည်.အပြင် University of Mandalay မှ ပေးအပ်သည်. Master of Business Administration (MBA) ဘွဲ.ရထားသူဖြစ်သည်။
၃၉ လမ်း(ဗန်းမော်တိုက်လမ်း)၊ ၇၁ လမ်းနှင်. ၇၂ လမ်းကြား၊ ရာဇာစင်တာ၊ မန္တလေးမြို.။